“အတွေးစလေးတွေ”: December 2012
နှစ်ဦးကြိုလေပြီ . . .
၂၀၁၂သည် မကြာမီအချိန်အတွင်း လောကကို လက်ပြနှုတ်ဆက်ရပေတော့မည်။ နောင်မည်သည့်အခါတွင်မှ ပြန်လည်တွေ့ဆုံရတော့မည်မဟုတ်။ ပြန်မဆုံနိုင်သော ထာဝရခွဲခွာခြင်းမျိုးဖြင့် လောကတွင်းမှ မထွက်ခါခင်အထိ လက်ကျန်အချိန်ကာလပိုင်းများကို တတ်နိုင်သလောက် ဖက်တွယ်ထားလိုဟန်ရှိသော ၂၀၁၂သည် နာရီသံတစ်ချက်ချက်ကြားတွင် အိုမင်းရင့်ရော်သည်ထက် ရင့်ရော်လာချေပြီ။ သင်္ခါရတရားသည် သက်မဲ့ဖြစ်သော ခုနှစ်သက္ကရာဇ်ကိုပင် အလွတ်မပေး။
သက္ကရာဇ်တစ်ခု ကုန်လွန်နှုတ်ဆက်သွားတိုင်း သက္ကရာဇ်သစ်တို့က အဆင်သင့်စောင့်နေကြသည်။ နှစ်ဟောင်း၏ အသက်တန်းသုံးလေးလအလိုကတည်းက နှစ်သစ်ကြိုမည့် ပြက္ခဒိန်တို့က ပလူပျံသလိုထွက်ပေါ်လာကြ၏။ အဟောင်းကိုပစ်၍ အသစ်ကိုမင်သော လူတို့၏ မတည်မြဲဖောက်ပြန်သော သဘောထားကို ၂၀၁၂သည် ရင်နာနာနှင့် သည်းခံခဲ့ရရှာပေမည်။ သူသည်လည်း ညီတော် ၂၀၁၁ကို ထို့နည်းနှင်နှင် လောကတွင်းမှ မောင်းနှင်ထုတ်ခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။ ၀ဋ်သည် လည်တတ်လွန်းပေစွ။
၂၀၁၁ခုနှစ်၏ အသက်တန်းကုန်ဆုံးချိန်ကို စိတ်မရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့စဉ်က နှေးကွေးလွန်းလှသော နာရီလက်တံများသည် မိမိကို နှုတ်ဆက်မည့်အချိန်တွင် မြန်လွန်းနေသည်ဟု ၂၀၁၂ မချိတင်ကဲ တွေးမိသည်။ အိုင်းစတိုင်း၏ ရီလေတီဗတီသီအိုရီ မှန်ကန်ကြောင်းကို အသက်နှင့်ရင်း၍ သက်သေပြနေရသည့်နှယ် ခံစားလာရပြန်၏။ နာရီစက္ကန့်တံ၏ ချက်ခနဲ ချက်ခနဲရွေ့လျားမှုနှင့်အတူ ၂၀၁၂၏ လက်ကျန်အသက်တန်းသည် တို၍တို၍လာနေချေပြီ။ မည်သည့်အရာကိုမှ ဆုပ်ကိုင်ထားရန် မစွမ်းသာသော အနတ္တသဘောကို ဆင်ခြင်မိရပြန်သည်။ လူသားတို့၏ ဘ၀နှင့် အသက်တန်းကို စိုးမိုးချုပ်ကိုင်ထားနိုင်စွမ်းသော သက္ကရာဇ်တစ်ခုသည်ပင် မိမိ၏ အသက်တန်းကို ဆုပ်ကိုင်ထားရန် မစွမ်းနိုင်။ လောကသည် တရားမျှတခြင်းဖြင့် တန်ဆာဆင်အပ်သော အမြတ်နိုးဆုံး ရတနာပင် ဖြစ်ပေသည်တကား။
လောက၏ တရားမျှတခြင်းသဘော အစိုးမရခြင်းသဘောကို မဆင်ခြင်နိုင်သော လူသားတို့ကား ကုန်လွန်တော့မည့် ၂၀၁၂ကို လွမ်းမောတသရန်ဝေးစွ။ လက်ပြနှုတ်ဆက်ရန်ပင် အလေးမမူ။ ကောင်းမည် ဆိုးမည် မဝေခွဲနိုင်သေးသည့် လာလတ္တံ့သော၂၀၁၃ နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုရန်သာ အားသန်နေကြသည်။ နှစ်သစ်သည် ကောင်းမြတ်ခြင်းများကို ယူဆောင်လာနိုးနိုးဖြင့် လည်တဆံ့ဆံ့ စောင့်စားနေကြသော လူသားတို့သည် ကုန်လွန်သွားတော့မည့် ၂၀၁၂ နှင့်အတူ မိမိတို့၏ အသက်ရှင်သန်ခွင့်တစ်နှစ် ကုန်ဆုံးသွားကြောင်း သိမှသိကြပါလေစ။ နောက်ပြန်လှည့်ခွင့်မရသော ဘ၀၏ အချိန်ကာလတစ်ခု ကုန်လွန်ဖြတ်သန်းသွားပြီး သေဆုံးခြင်း ပန်းတိုင်ကို တရွေ့ရွေ့နီးလာကြောင်းကို အာရုံမ၀င်စားသော လူသားတို့သည် ဘ၀ဟူသည်ကို ပန်းတိုင်အရောက် အပြေးပြိုင်ရသည့် မာရသွန်ပြေးပွဲဟု မှတ်ယူနေကြဟန်တူ၏။ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာပျက်မည်ဟူသည့် မရေရာသော ခန့်မှန်းချက်ကြီးကို အစိုးရိမ်ကြီးပြီး အလန့်ကြီးလန့်ခဲ့ကြသော လူသားတို့သည် အသက်တစ်နှစ်ကြီးရင့်ပြီး မိမိတို့၏ ဘ၀အဆုံးရောက်ရန် တစ်နှစ်ပိုနီးလာခြင်းဟူသည့် သေချာသော နိယာမတရားကို ကြောက်လန့်ခြင်းအလျဉ်းမရှိ။ လူသားသည် မသေချာ၊ မရေရာမှုများကိုသာ အလေးဂရုပြုတတ်လွန်းသော သတ္တ၀ါတစ်မျိုးပင် ဖြစ်နေပြန်၏။
နာရီလက်တံသည် တစ်ချက်ချက် သွားနေ၏။ ညဉ့်သည်လည်း တဖြည်းဖြည်း ရင့်ရော်လာနေသည်။ နှစ်ဦးကြိုရန် စုဝေးနေကြသော လူစုလူဝေးများထံမှ “ တစ်ဆယ် . . . ကိုး . . . ရှစ် . . . ခုနစ် . . .” ဟူသည့် ပြောင်းပြန်ရေတွက်သံတို့ သံပြိုင်ထွက်လာကြပြန်သည်။ ၂၀၁၂၏ ရှင်သန်ခွင့်သည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ကုန်ဆုံးပေတော့မည်။ “ ခြောက် . . . ငါး . . . လေး . . . သုံး . . . ” ရေတွက်သံတို့ ပိုမိုကျယ်လောင်လာကြသည်။ အနတ္တလူသားသည် အနိစ္စတရားကို ဥပေက္ခာပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေကြပြီတကား။ “ နှစ် . . . တစ် . . .” ၂၀၁၂ သည် နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပန်းကြီးစွာ မှုတ်ထုတ်လိုက်သည်။ “ Happy new year ” ဟူသည့် ကျယ်လောင်သည့် ကြိုဆိုသံကို ၂၀၁၂ ကြားမသွားနိုင်တော့။ သက္ကရာဇ်တစ်ခု၏ ရှင်သန်ခြင်း မှတ်တမ်းတစ်ခုသည် သမိုင်းမှတ်တမ်းဖြစ်သွားချေပြီ။
၂၀၁၃ သည် ပြန်လည်နုပျိုလာသော နာရီသစ်နှင့်အတူ လောကတွင်းသို့ နုပျိုလတ်ဆတ်စွာ ၀င်ရောက်လာ၏။ နှစ်ဟောင်းညတစ်ည၏ နိဂုံးသည် နှစ်ဦးနေ့သစ်တစ်ခု၏ နိဒါန်းနှင့်အတူ ညှိုးရော်ပျောက်ကွယ် သွားပြန်လေပြီ။ မကြာမီ လင်းရောင်ပျို့လာလိမ့်မည်။ အရုဏ်တက်လာလိမ့်မည်။ လောကသည် ပြန်လည်ဆန်းသစ်လာလိမ့်ဦးမည်မှာလည်း မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ။ သို့သော် . . . လူသားတို့၏ အသက်တန်းသည်ကား ပြန်လည်နုပျိုခြင်းသို့ ဦးတည်ခြင်းငှာ မစွမ်းနိုင်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းဘက်သို့သာ တရွေ့ချင်း ဦးတည်လျက်။ ပြန်လည်မရနိုင်တော့သော နုပျိုခြင်းများ၊ နာရီ၊ ရာသီ၊ အမှတ်တရများသည်ကား ၂၀၁၂နှင့်အတူ သမိုင်းဖြစ်သွားလေပြီ။ သမိုင်းသစ်ကို အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းများဖြင့် ရေးကြလေဦးမည်မှာ မုချ။
နာရီလက်တံသည် တစ်ချက်ချက် သွားနေပြန်လေသည်။ နှစ်ဦးဖြစ်သော ၂၀၁၃သည်လည်း အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်လျက်ပင် ရှိချေသည်တကား။ ။
( ၂၀၁၂ ခုနှစ် ည ၁၁ နာရီ ၃၀ မိနစ် )
Posted by Han Kyi at 10:32:00 am 12 comments: